Gcina i-euro ezingama-200 kwi-iPhone X nge-Yoigo | Iindaba zeGajethi
Gcina i-euro ezingama-200 kwi-iPhone X nge-Yoigo
URuben inyongo | | Abaqhubi
I-Yoigo iya kuba ne-iPhone X entsha kwikhathalogu yayo. Ukusuka kumqhubi weselfowuni bayazi ukuba ixabiso le-Apple flagship iyabiza. Yiyo loo nto bethathe ithuba lokumisela inyuselo apho Ungagcina ukuthengwa kwe-iPhone X ukuya kuthi ga kwi-euro ezingama-200 ubuncinci. Olunye ulwazi malunga nesibonelelo ngokunqakraza apha.
Unyuso lukaYoigo iyafumaneka ukuze ithwaleke. Oko kukuthi, thabatha inombolo yakho yangoku kwenye inkampani uye kuYoigo. Iya kuba ngeloxesha ke apho unokuthatha ithuba kwisibonelelo. Oku kubandakanya ixabiso elingenakubekwa. Kwindawo yokuqala, awuzukunikezela nganto ngaphambili- € 0 intlawulo ephantsi. Kwaye oku kulandelayo kuya kuba kukutyikitya ukuhlala kweenyanga ezingama-24, apho kufanelekileyo hlawula i-euro ezingama-30 ngenyanga.
Emva kweli xesha-iminyaka emi-2-, uya kuba neendlela ezimbini: buyisela i-iPhone X ukufumana enye itheminali okanye ukuhlawula imali esalindelweyo. Kukhetho lokuqala, uYoigo akazukukwenza ukuba uhlawule enye into; Uya kuqhubeka nokuhlawula i-smartphone elandelayo oyikhethayo. Kukhetho lwesibini, kuya kufuneka uhlawule isixa-mali esimiselweyo. Kwaye intlawulo yokugqibela ihambelana nomrhumo wee-euro ezingama-199. Ke ngoko, ukuba sidibanisa ixabiso lokugqibela kuzo zombini iindlela, kufuneka sivuselele i-iPhone X kunye ne-Yoigo emva kweminyaka emibini, ixabiso le-Cupertino smartphone iya kuba 720 euro. Ngokhetho lwesibini isixa sokugqibela-kwaye siza kuba ngabanini be-iPhone X-siyakuba yiyo 919 euro.
Nokuba kunganjani na, ukonga kuqinisekisiwe. Kwaye ukuba ujonga, umzekelo, kwivenkile esemthethweni yeApple, I-iPhone X iqala kwi-1.159 euro ngeyona nguqulelo isisiseko kwaye inokufikelela kwi-1.329 euro. Okokugqibela, ndikuxelele ukuba i-iPhone X kukuzivelela kwe-Apple smartphone kwaye ingena kwikamva ngokupheleleyo kuyilo olungaqhelekanga kwaye inika umphambili apho isikrini singumphikisi ophikisayo.
Ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya malunga nale Yoigo unikezelo cofa apha
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Abaqhubi » Gcina i-euro ezingama-200 kwi-iPhone X nge-Yoigo
I-Amazon Prime Video ngoku iyafumaneka kwiXbox One